China Hot uxinzelelo umtya ngelaphu ephothiweyo ibhodi nokwenziwa kunye mveliso | Igolide yoqalo
Umphezulu wamaplanga omthi olaminethiweyo unobumba bendalo ococekileyo kunye ngqo. Ibhodi inendawo yendalo yoqalo. Ukongeza, ubume bayo bohlukile, kwaye umphumo wokuhombisa ukwahlukile. Xa kuthelekiswa nomthi oqinileyo ngokubanzi, amandla oomatshini we-bamboo elaminethiweyo aphezulu, kwaye i-coefficient yokuncipha incinci. I-REBO yokuhombisa ngaphandle iqulathe i-bamboo eyenziwe ngokhuni eyi-18mm, esele i-oyile kunye neeklip zecala.
Uqalo olukiweyo oluqinileyo lwenziwe ngenkqubo ekhethekileyo esebenzisa i-100% yeMoso Bamboo, eyenza ukuba ibenzima kwaye yomelele kune-bamboo eqhelekileyo. it yomelele kwaye inzima kuneenkuni. I-bamboo eyolukiweyo eyi-strand yenye yezona ndlela zinzima zokwakha umgangatho, kunzima kunezinto zemithi ezilukhuni. Umgangatho womgangatho owenziwe ngomthi woqalo kunye nemigangatho ziyamelana nokufuma kuneminye imigangatho yoqalo kunye nezinye izinto. I-REBO decking decking iya kuba yinto efanelekileyo kuwe.
Ibhodi ye-bamboo inobubanzi obuncinci, udonga olungenamngxuma kunye nobukhali obukhulu, kwaye ukwakheka kwayo kwahluke kakhulu kokhuni. Amandla kunye noxinano lwe bamboo luphezulu kunolo lweemithi eziqhelekileyo, ke ngoko, ukomelela kweemveliso zebhodi yoqalo kukhulu kunezo zeemveliso zesiqhelo. Ibhodi ye-bamboo inombala ochanekileyo nogudileyo, umbala olula, kulula ukuyenza iblitshi, idayi kunye nekhabhoni. I-bamboo ingaqwalaselwa ibe sisisombululo esigqwesileyo sokufaka indawo zangaphandle ezinje ngamachibi okudada, iipatio, kunye neendlela zendlela.
Umphezulu wamaplanga omthi olaminethiweyo unobumba bendalo ococekileyo kunye ngqo. Ibhodi inendawo yendalo yoqalo. Ukongeza, ubume bayo bohlukile, kwaye umphumo wokuhombisa ukwahlukile. Xa kuthelekiswa nomthi oqinileyo ngokubanzi, amandla oomatshini we-bamboo elaminethiweyo aphezulu, kwaye i-coefficient yokuncipha incinci. I-REBO yokuhombisa ngaphandle iqulathe i-bamboo eyenziwe ngokhuni eyi-18mm, esele i-oyile kunye neeklip zecala. Zonke iikona ezine zixubekile, ke kulula kwaye kulula ukuhamba kumgangatho woqalo. Nje ukuba umgangatho we-bamboo ubekhona, ibhodi iya kuhlala yahlulwe kancinane ukuze amanzi angabi ndawo kwaye umoya ujikeleze. Iphaneli yangaphandle yoqalo inamacala agudileyo, aqingqiweyo kunye nengubo engatyibilikiyo. Inokufakwa ngokwahlukeneyo kumacala omabini.
Okulandelayo: Umbala omnyama akukho deformation yokukhangela bamboo
Iibhodi zokuHamba ngoQalo
Iibhodi ze-Bamboo Decking ezenziwe ngeStrand